Man City oo heshay albaab ah kala bixi karto xidiga Rome Daniele De Rossi. - Caasimada Online
Home Warar Man City oo heshay albaab ah kala bixi karto xidiga Rome Daniele...
Man City oo heshay albaab ah kala bixi karto xidiga Rome Daniele De Rossi.
Manchester City ayaa fursad u heshay inay iibsan karoodaan xidig ay waayo badan baadi goo ugu jireen ka dib markii mid ka mid ah Shareholders-ka Rome uu qirtay inay kooxdu iska iibineyso Daniele De Rossi ayna geleyso ganacsi is biimeyn ah. Sida uu qoray wageyska Caught Offside.
Waxaa lasoo jeedinayaa inay Giallorossi xidigaan ku iibin karto 47 milyan oo ginni. Waana fursad ay u riyaaqeyso kooxda Etihad Stadium oo in badan baacsaneysay xidigaan.
Markii wax laga weydiiyey Shareholder-ka wuxuu u sheegay Il Messaggero: “Waxaa weeye ismiidaamin ganacsi ku guul darreysiga iibinta De Rossi.”
Warsidaha talkSPORT ayaa sheegaya in macalinka Sky Blue Roberto Mancini uusan ku aamin qabin xidigaha burburiyeyaasha ah ee uu sanadii hore lasoo wareegay sida Javi Garcia iyo Jack Rodwell, uuna doonayo inuu kooxda Etihad Stadium qadkeeda dhexe ku xoojiyo xidiga Rome.
Wuxuu kooxdiisa u saftay 400 oo kulan 12 sano oo uu ku sugnaa Stadium Olimbico. De Rossi ayaana kooxdiisa ka caawiyey guulo wax ku ool ah balse waayadaan oo ay Rome weysay booskeedii Champions League uma muuqato mid ceshan karta xidigaan.